Bitcoin waxay sii waddaa inay dejiso Heerar taariikhi ah | vfxAlert official blog
Tilmaamayaasha aan caadiga ahayn. Wax badan ka soo qaad Bitcoin!
Bitcoin waxay sii wadaa inay dejiso heerar taariikhi ah. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in $ 57K halkii BTC uusan aheyn xadka koritaankuna uu sii socon doono. Waa waqtigii laga fikiri lahaa sida lacag looga sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah .
Dhamaan boggaga iyo koorsooyinka ku saabsan sida loo barto ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh tilmaamayaasha falanqaynta farsamada aasaasiga ah sida Moverage Average Ganacsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu ogaado aasaasiga oo uu ku dhaqmo. Ha ku mashquulin "caadiga ah" - adoo adeegsanaya jaantusyada 'Trading View' ee barnaamijka vfxAlert, waxaad ka heli doontaa calaamado badan oo ganacsi oo dheeri ah waqtiga dhabta ah.
Aynu tixgelinno saddex istiraatiijiyad sida tusaale u ah ganacsiga tilmaamayaasha farsamo ee aan caadiga ahayn ee ka socda barnaamijka TradingView.
Hantida ganacsiga : Nooc kasta oo lacag ah. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
Dhammaan tilmaamayaasha leh goobaha aasaasiga ah!
.1. Guri la'aan - waa isbeddel uun!
Ku ganacsashada isbeddelku waa ikhtiyaarka ugu faa'iidada badan ee hanti kasta. Dhibaatada ugu weyn ayaa ah in la go'aamiyo daqiiqada bilowga, iyo tan ka sii muhiimsan, dhamaadka. Intaa waxaa sii dheer, waad ka ganacsan kartaa «Dhex-dhexaadinta / Dibadda U Baxa» fursadaha kala duwan inta lagu jiro xilliyada fidsan.
Waxaan ku go'aamineynaa isbeddelka isgoysyada MA Cross; ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee ku-wareejinta guriga ayaa noqon doona qaybaha "xoqan" ee aagga Chop .
CALL- ikhtiyaar . Qiimaha ka sarreeya Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama "dhakhso" MA wuxuu ka gudbayaa mid "gaabis ah" mid ka hooseeya xagga hoose. Aagga Gooyuhu waa buluug, wuxuu xaqiijiyaa kor u kaca.
Dooro- Xaaladaha iska soo horjeedda: qiimaha ka hooseeya laba MA ama "dhakhso ah" wuxuu ka gudbaa "gaabis" kor ilaa hoos. Aagga Chop waa casaan saddexda baararka ee ugu dambeeya ee histogaraam.
.2. Sax Sax (Volume + + Momentum) .
Suuqa waxaa had iyo jeer loo dhaqaajiyaa oo kaliya mugga, waxaad u baahan tahay inaad fiiriso dhaqdhaqaaqooda istiraatiijiyad kasta oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah. Tilmaamaha VWMA waa iskudhaf wanaagsan oo ah "Qiyaasta Moving Trending + Tick Volume". Marka mugga uu kordho, VWMA waxay si dhaqso leh uga jawaab celisaa isbeddelada sicirka, way gaabisaa marka mugga ay yaraadaan, waxaa fiican inaad ka maqnaato suuqa.
Tilmaamaha 'SMI Ergodic Indicator', marka lagu daro go'aaminta xaaladaha xad-dhaafka / xad-dhaafka ah iyadoo la adeegsanayo algorithm-ka 'Stochastic algorithm', wuxuu tixgelinayaa "Xawaaraha" isbeddelka ama "Momentum". Tani waxay u oggolaaneysaa shaandhaynta calaamadaha been abuurka ah iyo VWMA dib u dhigista magdhawga.
CALL- ikhtiyaar . Qiimuhu wuu ka sareeyaa VWMA ama wuxuu ka jabayaa xagga hoose ilaa kor. SMI waxay u sii kordheysaa aagga xad dhaafka ah;
Dooro- Xaaladaha iska soo horjeedda: VWMA ama ka jabiya kor ilaa hoose ama hoos u dhig hoos. SMI waxay hoos ugu noqotaa aagga kormeerka.
№3. Tilmaamaha «AROON»: istiraatiijiyad waayo-aragnimo leh .
Sida uu qoraagu sheegay, kaliya "AROON" ayaa ku filan ganacsi faa'iido leh, tilmaamayaal kale looma baahna. Tilmaamuhu wuxuu u shaqeeyaa si waafaqsan maxaliga maxaliga ah (ee kor u kaca) iyo min (hoos u dhaca). In kasta oo si cadaalad ah loo aamini karo ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, xaqiijin dheeri ah ma noqon doonto mid faa iido badan
CALL- ikhtiyaar . Xagga sare, khadka liinta (Aroon Up) wuxuu xaqiijinayaa bilowga ama sii socoshada kor u kaca. Kordhinta macnaheedu maahan inaad isla markiiba furto ikhtiyaar. Waxaan sugeynaa ugu yaraan 2-3 baararka isbeddelka;
Dooro- Xaaladaha iska soo horjeedda: xagga sare, khadka buluuga ah (Aroon Down) wuxuu xaqiijinayaa hoos u dhaca. Xeerarka furitaanka isma beddelaan.
Inta lagu jiro xilliyada kala-guurka badan, waxaad ka furan kartaa meherado is-goyska khadadka. Maahan kuwa cusub!
.4. Maxaa lagu sameeyaa AltCoins?
Jawaabtu way fududahay: u ganacsato si la mid ah sida Bitcoin, xeerarka calaamadaha binary auto isma beddelaan. Aan aragno tusaalooyinka LiteCoin iyo Ethereum:
Sida aad u aragto, wax waliba si fiican ayey u shaqeeyaan; waxa ugu muhiimsan waa in laga doorto lacagaha laga helo TOP-20 iyada oo la adeegsanayo xarfo weyn. Falanqaynta farsamada ayaa durbaba sifiican uga shaqeyneysa halkaan, waxaa jira fikrado mala awaal ah, laakiin waa kuwo waqti gaaban soconaya, kadib taas oo sida caadiga ah dhaqso u soo kabato.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Muddada dhicitaanka ee ikhtiyaarrada waa in aysan ka yarayn 5-7 daqiiqo, xitaa haddii xilli-hawleed ahaan loo doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeenna .
Aan soo koobno . Tilmaamayaasha aan caadiga aheyn waa aalad wanaagsan oo dheeri ah oo lacag lagu sameeyo lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Waxa ugu muhiimsan waa in la qaato oo keliya calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, oo aad go'aannada gaarto naftaada.